Waraysi Gudoomliya Baarlamanka Maaamulka Galmudug oo Ka Soo Dhex Qayliyey Qol Dhexdiis kana Hadlay Sababaha Madaxweynaha Maamulkaas Ugu Xidhay Xabsi guri Ah Cadaado
Tuesday September 26, 2017 - 19:43:37 in WARARKII UGU DAMBEEYEY by Gaydhe Giire
Cadaado (ALJ) Guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug ayaa sheegay in ay Isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug lagu amray in aysan ka bixi karin Guriga ay ka dagan yihiin madaxtooyada maamulka ee Cadaado.
Guddoomiye Casir sheegay in ciidamo ku sugan madaxtooyada Galmudug u sheegeen in aysan ka bixi karin Isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka madaxtooyada Galmudug, haddii ay ka baxaanna aysan damaanad qaadi karin amnigooda.
‘’Markii hore warka arrinta ku saabsan suuqa ayaan ka maqmaqlayay oo kaliya, laakiin waxaan xaqiiqsaday in aan xabsi ku jirnno markii aan damcay in aan magaalada danno ii gaar ah ka soo qabsado oo la ii sheegay in aan bixi karin’’ ayuu yiri guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug.
Guddoomiye Casir ayaa sheegay in amnigooda qatar ku jiro madaama ayuu yiri madaxtooyada Galmudug la soo dhoobay ciidamo gaar ah oo ka amar qaata madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf.
‘’Waxaan rabnaa in aan ogeysiino bulshada Soomaaliyeed in madaxweynaha uu qaadi doonno mas’uuliyada wixii dhibaato ah ee na soo gaara Aniga iyo madaxweyne ku-xigeenka’’ ayuu yiri guddoomiye Casir.
Sababta uu sidan u sameynayo madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayuu ku sheegay baqdin uu ka qabo xildhibaannada baarlamaanka oo ka gadoodsan tallaabada uu qaaday.
Deg Deg:Agaasimihii Warfaafinta Ee Shalay La Xidhay Oo Dib U Helay Xoriyadiisii
DEG DEG:Dagaal Qadhaadh Oo Dhexmaray Ciidamada Dawlada Faderalka Soomaliya Iyo Al-Shabaab Iyo Faah Faahinta Dagaalkasi Iyo Goobta Uu Dagaalku Ka Socdo